दसैं : मेरो घर नआउनुस्, म पनि आउँदिन - Mitho Khabar
October 22, 2020 mithokhabarLeaveaComment on दसैं : मेरो घर नआउनुस्, म पनि आउँदिन
‘हामी घर जाँदैनौं किनकि घरमा आमा हुनुहुन्छ र यसपालि हामी यसैमा खुसी छौं । विजयादशमीको सबैमा शुभकामना । अर्को वर्ष फेरि भन्न पाइयोस्,’ डा. रमेश कोइरालाले घटस्थापनाको दिन ट्वीटरमा लेखे ।
‘हामी यसपालि दसैंमा घर जान्नौं र यसैमा खुसी छौं’ आशयको यो शुभकामना शताब्दीकै अनौठो लाग्न सक्छ धेरैलाई । दसैं मात्रै एउटा यस्तो पर्व हो, जुन पर्वले विभिन्न स्थानमा छरिएका परिवारका सदस्यलाई एक दिन भए पनि एक ठाउँमा जम्मा गराउँछ । त्यही कारण दसैं सांस्कृतिक पर्व भएको छ ।
मानौं, कसैको परिवारका सदस्यबीच आपसी वैमनस्य छ । सम्पत्ति भागबन्डा, सम्बन्धमा आएका उतारचढाव वा अन्य कारणले पारिवारिक बेमेलको स्थिति भए पनि दसैंमा भेटघाट गर्ने परम्परा छ । यतिसम्म कि– कसैको बा र छोरा वा दाजुभाइबीच बोलचाल छैन, अन्य समयमा भेट हुँदा पनि बोल्दैनन् । तर, दसैंमा नबोली नबोली भए पनि आफूभन्दा ठूलाबाट टीका थाप्ने र आशीर्वाद लिने चलन छ ।
यसपालि इतिहासकै फरक दसैं हुनेछ, असाध्यै सुमधुर सम्बन्ध भएकाहरू पनि टाढै बस्नुपर्ने र कुराकानी गरेरै शुभकामना लिनु–दिनुपर्ने बाध्यता छ । छिन्नभिन्न परिवारका सदस्य मात्रै होइन, टाढा रहेका आफन्तहरूबीच भेटघाट गराउने पर्व पनि हो दसैं ।
अहिले विश्वरभर फैलिरहेको कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) ले पहिलो पटक नेपाली समाजलाई एकजुट हुनबाट रोेकेको छ । किनकि यो भाइरस एकबाट अर्कोमा सजिलै सर्न सक्छ । संक्रमण भएपछि बालक, वृद्ध र अन्य रोगीलाई मृत्युकै मुखमा पु-याउन सक्ने भएकाले हुन सक्छ डा. कोइराला लेख्छन्, ‘विजयादशमीको सबैमा शुभकामना । अर्को वर्ष फेरि भन्न पाइयोस् ।’
यो भाइरस आफैंमा यति खतरनाक छ, कतिपयलाई लक्षणै देखिन्छ । त्यसकारण स्वस्थ अनुभूति गर्ने व्यक्तिले समेत आफन्तलाई भेट्नुअघि सोच्न बाध्य हुनुपर्ने स्थिति छ ।
काठमाडौंबाट बाहिरिनेहरूको भीड विभिन्न बस काउन्टरमा थामिनसक्नुहुन्थ्यो भने एयरलाइन्स कम्पनीका टिकट बिक्रीकर्ताले साताअघि नै टिकट सकिएको नोटिस टाँस्थे । यसपालि ती सबै अवसर गुमे
शुभकामनाको भाका फेरियो
नवरात्र सुरु भएपछि विजयादशमीको शुभकामना आदानप्रदान गर्नु पुरानो प्रचलन हो हाम्रो । राजनीतिक दलका शीर्ष नेता, पार्टीका भ्रातृ संगठन र व्यापरिक प्रतिष्ठानले आकर्षक शुभकामना कार्ड बनाएर शुभेच्छुकहरूमा पु-याउने परम्परा निकै वर्ष चल्यो । जब फेसबुक, ट्वीटरमा सर्वसाधारण रमाउन थाले, कार्ड छाप्ने र बाँड्ने प्रचलनमा कमी आयो । अहिले प्रायःले आकर्षक डिजाइनको शुभकामना कार्ड बनाएर सामाजिक सञ्जालमै पोस्ट गर्छन् ।
यसपालि पनि आकर्षक डिजाइन गरेर साथीभाइ र आफन्तलाई शुभकामना दिने क्रम जारी छ । तर, शुभकामना सन्देश लेख्ने भाका भने फेरिएको छ । ‘म पनि तपाईंको घर आउँदिन, तपाईं पनि मेरो घरमा नआउनुस्’ आशयका शब्दहरू अचेल धेरैको फेसबुक तथा ट्वीटर वालमा देखिन्छ ।
सरकारी एवं निजी कार्यालयमा काम गर्नेहरूले दसैमै हो, सबैभन्दा लामो छुट्टी पाउने । दसैं सुरु हुनु दुई साताअघिदेखि नै मान्छेहरू क्यालेन्डर हेर्दै घर जाने र फर्किने सूची बनाउँथे । सीमित बिदा दिने कार्यालयमा काम गर्ने कर्मचारीको सेड्युल मिलाउनै दुई चारवटा त मिटिङ गर्नुपथ्र्यो । छुट्टीमा घर जान बिदा पाएका कर्मचारी दिन गनेर बस्थे । लामो समय लकडाउन भोगेकाले यसपालि बिदा कहिले पाइएला भन्दै उत्साहित हुनेहरूको संख्या असाध्यै न्यून छ ।
काठमाडौंबाट बाहिरिनेहरूको भीड विभिन्न बस काउन्टरमा थामिनसक्नुहुन्थ्यो भने एयरलाइन्स कम्पनीका टिकट बिक्रीकर्ताले साताअघि नै टिकट सकिएको नोटिस टाँस्थे । यसपालि ती सबै अवसर गुमे ।
गाउँ पनि सुनसान
दसैंका रौनकले सहरलाई खास छुन्न । कंक्रिटको सञ्जाल धेरै भएकाले होला, काठमाडौंमा टोलटोलमा मान्छे भेटिन्छन् तर समाज भेटिँदैन । कतिपय टोलमा महिनामा एक दिन आफैं सडक बढार्ने, घरमा पालेका कुकुरलाई जथाभावी दिसापिसाब नगराउने, ढल, खानेपानीका विषयमा छलफल गर्ने भन्दै विभिन्न समूह बनाइन्छ । ती समूहमा विभिन्न स्थानबाट आएर एउटा टोलमा घर बनाएकाहरू समेटिएका हुन्छन् । केही समय समूहमा छलफल गरेर छुट्टिएपछि सम्बन्ध पनि त्यही टुंगिन्छ । ती समूहमा हुने कुराकानी, छलफल र काम गर्ने शैली हेर्दा लाग्छ– जबर्जस्ती बनाउन खोजिएको सम्बन्धले लय समाउनै नपाई पूर्णविरामको यात्रा तय गर्छ । यति हुँदा हुँदै पनि केही व्यक्तिलाई एकै ठाउँमा भेटघाट गराउने र छलफल गराउने मेसो मिलेको थियो ।
यसपालि गाउँलाई पनि हार्दिकताविहीन बनाइदियो । कोरोना संत्रासले मान्छे बिरामी पर्दा पनि भेटघाट बन्द गर्नुपर्ने बाध्यता आइलागेको छ । प्रायः साँझ परेपछि लगाउने तगारो अहिले दिउँसै लगाउँछन् गाउँका मान्छेहरू
कोरोना संक्रमणको कारण भेटघाट त बन्द भयो नै । छिमेकीका घरमा कोरोना संक्रमित भयो रे भन्ने सुनेकै भरमा वल्लोपल्लो घरमा ओहोरदोहोर गर्दा डब्बल मास्क प्रयोग गर्न थालिएको छ । आशंकित संक्रमितको परिवारसँग बाटोमा भेट भयो भने पनि परैबाट ‘साइड’ लाग्ने गरिएको छ ।
गाउँमा अझै हार्दिकता बाँकी छ । सायद गाउँको माटो, पानी र बोट बिरुवा गाउँको भन्दा फरक छ । यसकारण कसैको घरमा कोही बिरामी पर्दा मात्रै होइन, गाईभैंसी वा अन्य पशुचौपायामा समस्या आउँदा पनि आँगनमै जम्मा भएर सरसहयोग गर्ने चलन छ । यसपालि गाउँलाई पनि हार्दिकताविहीन बनाइदियो । कोरोना संत्रासले मान्छे बिरामी पर्दा पनि भेटघाट बन्द गर्नुपर्ने बाध्यता आइलागेको छ । प्रायः साँझ परेपछि लगाउने तगारो अहिले दिउँसै लगाउँछन् गाउँका मान्छेहरू ।
पिङ नहाली दसैं आयो
रोटे र जाँते पिङको चलन त धेरै ठाउँमा हराइसक्यो । चौतारो वा भन्ज्याङमा हुर्किएको ठूलो रुखमा डोरीको पिङ हाल्ने पुरानो चलन हो । यसपालि पिङ पनि हाल्न पाइनेछैन । स्थानीय प्रशासनले भीडभाड नगर्न अपिल गरेसँगै पिङमा रमाउनेहरू समेत पिङ हालेर भीडभाड गर्न नहुने पक्षमा छन् ।(राजधानी दैनिक बाट)
April 22, 2022 mithokhabar
चालक नहुँदा थन्कियो १४ करोड रुपैयाँको ब्रुमर
April 11, 2022 mithokhabar